10 August 2009 – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
A New Book Published Today!
မှတ်မိနေသေးတာ တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ ဝတ်မှုန်မဂ္ဂဇင်းဆိုပြီး ကျွန်တော် အယ်ဒီတာလုပ် ထုတ်ဝေခဲ့တုန်းကပါ။ (၁၉၇၀ ဝန်းကျင်)… ။ ကျွန်တော့် မဂ္ဂဇင်းက ဇိုလူးဖတ်လူး (စိုလူးဖတ်လူး) ဆိုတာလို ယိုင်နဲ့နဲ့မို့ အရောင်း မတွင်ကျယ်ပါဘူး။ သည်တော့ ရတတ်သမျှ ကြော်ငြာလေးတွေ လိုက်ရပါတယ်။ ခုနှယ်ခါလို ကြော်ငြာအင်အားကြီးတွေ မရလေတော့ ကိုယ့်လူချင်း အတင်းညှင်းဆဲပြီး ကြော်ငြာတောင်းရာမှာ ဆရာအီကြာကွေးလည်း အဲဒီ ဒဏ်ခံရပါတယ်။
ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ “အီကြာကွေး၏ အုတ်ကျင်းကိုသာ လိမ်လို့ရမည်” ဆိုတဲ့ စာမူယူသုံးပြီး စာမူခကို မပေးတော့ဘဲ ဆရာရဲ့ ကလောင်ခွဲဖြစ်တဲ့ “ဓနုဖြူ ကျော်ထွန်း”ရဲ့ ကဗျာစာအုပ် ကြော်ငြာခနဲ့ နှိမ်လိုက်တာပါပဲ။ ပြဿနာက ခဲစာလုံး စာစီရာမှာ ဓနုဖြူကျော်ထွန်းဟာ “ဓနုဖြူ ကျော်ထိန်း” ဖြစ်လိုက် “ဓနုဖြူ ကျော်ထန်း”ဖြစ်လိုက်။ နောက်ဆုံး စာအုပ်ထွက်လာတော့ နာမည်သာ မှန်သွားပြီး ရှေ့က ဂုဏ်ပြုထားတဲ့ မြို့နာမည် မှားသွားတော့ တာပါပဲ။ “ဓဖြူနု” ကျော်ထွန်း ဖြစ်သွားခဲ့ရာမှာ ဆရာအီကြာကွေး မချိသွားဖြဲ ဆဲလိုက် ဆိုလိုက်တာ အလွန်ပျော်စရာ ကောင်းခဲ့ပါရောဗျာ။
စကားအစ ပြန်ကောက်ရရင် မြိတ်တစ်ကြော စာဆိုပွဲကအပြန်မှာလည်း အသွားခရီးတုန်းက ဂျက်လေယာဉ်နဲ့ လေယာဉ်မှူးကြီးပဲ ပြန်တွေ့ဆုံရလို့ ကျွန်တော်တို့ ဝမ်းသာကြရပါတယ်။ မြိတ်အသွားမှာကတည်းက ခင်မင်ပြီးသားမို့ အပြန်ခရီး လေယာဉ်ပေါ်တက်တက်ချင်းပဲ ကျွန်တော်ဟာ လေယာဉ်မောင်းခန်း သွားပြီး ထိုင်လိုက်ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ထိုင်ရမယ့် ခုံတန်းကလည်း လေယာဉ်မှူးအခန်းနဲ့ကပ်လျက် ရှေ့ဆုံးတန်းပါ။
လေယာဉ် စတင်ပျံတက်လို့ နည်းနည်းလည်း ငြိမ်သွားရော လေယာဉ်မှူးကြီးက ကျွန်တော့်ကို ကော်ဖီနဲ့ ဧည့်ခံစေပါတယ်။ လေယာဉ်မယ် ချောချောလေးက တာဝန်ယူပါတယ်။
“ဦးသုမောင် ဘာများလိုအပ်ပါသေးသလဲ”ဆိုပြီး ကလေးမက လောကဝတ် ပျူငှာလုပ်လို့ သူ့ကို လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ နောက်ကျော ဝင်ပေါက် လိုက်ကာ ဟနေတဲ့ကြားက ရှေ့ဆုံးခုံမှာ ဦးထုပ်စိုက်စိုက် ဆောင်းပြီး ငုတ်တုတ် အိပ်ငိုက်ကောင်းနေတဲ့ ဆရာကွေးကို လှမ်းမြင်ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ကျီစားချင်စိတ် ပေါက်လာပါတယ်။
“ဦးသုကတော့ ပြည့်စုံပါပြီ သမီးရယ်… အဲ… ဟောဟို ရှေ့ဆုံးခုံမှာ တွေ့လား… ဦးထုပ်နဲ့ ဘဘကြီး၊ အဲဒါ ဦးသုရဲ့ ဦးလေးပဲ၊ သူက မနက် စောစောမှာ လက်ဖက်ရည်နဲ့ “အီကြာကွေး” စားရမှ ကျေနပ်တယ်။ မစားရရင် သိပ်စိတ်ဆိုးတာ။ အဲဒါ သမီးက သွားတောင်းပန်လိုက်ပါကွယ်…” ဆိုပြီး ခပ်တည်တည်နဲ့ ချွန်တွန်းလုပ်လိုက်ရာမှာ လေယာဉ်မယ်ကလေးကလည်း…
“ဘဘကြီး လေယာဉ်ပေါ်မှာ အီကြာကွေး မပါပါဘူး”လို့ သွားပြောပါတော့သတဲ့။ သည်မှာတင် လေယာဉ်ပေါ်မှာ “အီကြာကွေးပါတယ်” “မပါဘူး”ဆိုပြီး အချီအချ ဖြစ်ပါလေရော။ တကယ်က ကလေးမခမျာ စာရေးဆရာကြီး အီကြာကွေးမှန်း သိမှ မသိဘဲကိုး။ နောက်ဆုံးတော့ ထုံးစံ အတိုင်း အားရပါးရ ရယ်မောရင်း ကျွန်တော့်ကို အသံတိတ် ပါးစပ်လှုပ် တစ်တစ်ခွခွ ဆဲပြပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။ လေယာဉ်မှူးအခန်း အဝင်က လိုက်ကာ ဟစိစိကြားက မြင်ရတဲ့ ဆရာကြီး အီကြာကွေးရဲ့ မျက်နှာကို ခုထိ မြင်နေတုန်းပါပဲ။
[ကနေ့ သြဂုတ်လ ၁၀ရက်နေ့မှာ စတင်ဖြန့်ချိလိုက်တဲ့ “သုမောင်”ရဲ့ “ဟိုတစ်စ သည်တစ်စ မောင်ဗလ” စာအုပ်ထဲက ကောက်နုတ်ချက်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရောင်းဈေးက ကျပ် ၁၅၀၀ပါ။ (ရောင်းဈေးက သနားစရာလေးနော်။ ဒေါ်လာနဲ့ဆိုရင် တစ်ကျပ်ခွဲတောင် မရှိရှာဘူး။)]
Author lettwebawPosted on 10 August 2009 13 August 2009 Categories Excerpts5 Comments on A New Book Published Today!
Author lettwebawPosted on 10 August 2009 17 February 2010 Categories Excerpts, Reproduction, Short Story26 Comments on ဖက်ခွလုံး